Akụkọ Dan Pantelo na Martech Zone |
Edemede site na Dan Pantelo
Dan bụ onye isi teknụzụ ahịa na onye nchoputa / CEO nke Marpipe. Tupu ịmalite Marpipe, Dan malitere ụlọ ọrụ ịzụ ahịa site na ụlọ ezumike ya na kọleji, bụ nke ghọrọ ụlọ ọrụ na-eto ngwa ngwa nke dabeere na Soho, Manhattan nke ọkachamara na mmepụta ihe na ọchịchọ maka azụmahịa DTC. Emepụtara Marpipe na mbụ mgbe ụlọ ọrụ ahụ nwetara nsogbu na nnwale okike, na taa, Marpipe ewepụtala ihe karịrị $ 10m site na mmasị Adobe, Samsung, na ndị isi na Buzzfeed, Hubspot, MediaMath, na Criteo.
Marpipe: Ndị na-ere ahịa na-eji ọgụgụ isi ha kwesịrị ịnwale ma chọta mgbasa ozi imeri ihe okike
Ruo ọtụtụ afọ, ndị na-ere ahịa na ndị mgbasa ozi adaberewo na data ezubere iche ndị na-ege ntị ka ha mara ebe na n'ihu onye ha ga-eji mepụta mgbasa ozi ha. Mana ngbanwe na nso nso a site na omume mgbawa data na-akpa ike - nsonaazụ nke iwu nzuzo ọhụrụ na nke dị mkpa nke GDPR, CCPA na Apple's iOS14 tinyere - ahapụla ndị otu na-ere ahịa na-akpa ọchị. Ka ọtụtụ ndị ọrụ na-ahapụ na nsochi, data ezubere iche ndị na-ege ntị na-aghọ obere ma bụrụ ndị a pụrụ ịdabere na ya. Ụdị na-eduga n'ahịa